Al-shabaab oo beeniyey in uu xiriir ka dhexeeyo ciidamada Col. Barre Hiiraale ee Jubbada hoose – Radio Daljir
Oktoobar 27, 2013 3:49 b 0
Baraawe, October 27, 2013 – Ururka Al-shabaab ayaa markii ugu horaysay beeniyey warar sheegayey in uu xiriir wada shaqayn ah ka dhexeeyo ururka Al-shabaab iyo ciidamo u wato Col. Barre Aadan shire Hiiraale oo dagaal kula jira maamulka KMG ah ee Jubba.
Sheikh Cali Maxamuud Raage oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ururka iyo Col. Barre Hiiraale aysan ka dhexayn? xiriir ah isla marakasna aanay marna la kulmin, waxaa uu hadalkiisa ku sii daray in uu la mid yahay dhinacyada ay la dagaalamayaan.
?Al-shabaab iyo ciidanka barre Hiiraale ma jiro xiriir ka dhexeeya, wuxuu ka mid yahay kuwa aan dagaalka kula jirno, meel aan ku kulannay iyo isbedel ku dhacay midna ma ogin.? Sidaas waxaa saxaafada u sheegay Cali dheere.
Maamulka KMG ah ee Jubba ayaa horay u sheegay in uu xiriir adag ka dhexeeyo kooxda iyo Col. Barre oo ciidankiisu ku sugan yihiin deegaanka Goob-weyn ee Jubbada hoose, halkaas oo ah meelaha ay Al-shababaab ka soo qaadaan duulaanka Kismaayo xiliyada qaar.
Docda kale Afhayeenka ururka al-shabaab waxaa uu beeniyey in ay ku hajabeen in ay dili doonaan sheikh Maxamed Cabdi umal oo ka mid ah culimada waa wayn ee Soomaalida, Cali dheere waxaa uu tilmaamay Al-shabaab in aynan dagaal la geli doonin xarakada Ictisaam.
?Al-shabaab marna ma sheegin warkaas, cidii baahisay iyaga ayaa la weydiin doonaa halka ay ka keeneen.? Ayuu hadalkiisa ku sii daray afhayeenka Al-shabaab oo ka jawaabay su?aal laga weydiiyey hanjabaada Al-shabaab ee qaar ka mid ah culimada.